Ogaden News Agency (ONA) – Kulankii 2aad ee culima-awdiinka Ogadenya ee Garissa iyo baaq ay soo saaren culumadu
Kulankii 2aad ee culima-awdiinka Ogadenya ee Garissa iyo baaq ay soo saaren culumadu
Culima-awdiinka Ogadenya ee ku dhaqan magaalada Garissa ee xarunta gobolka W/bari-Kenya ayaa shalay isugu yimid kulankoodii labaad ee ay kaga wada hadlayeen wacyi galinta bulshada Ogadenya ee ku dhaqan wadanka Kenya iyo guud ahaanba caalamka,kulankan oo daba socday kulan hore oo ay culimadu ku qabteen isla magaalada Garissa ayay culimadu kaga hadleen doorka kaga aadan halganka loogu jiro xoraynta Ogadenya iyo ku baraarujinta shacabka qiimaha midnimada ee ay diinteena suubani tilmaantay.
Sheekh Maxamed Faarax oo hogaaminayay kulanka culimada ayaa madasha kasoo jeediyey muxaadaro diini ah oo ku qotontay sida ay waajib diini ah u tahay taageerida halganka hubaysan ee loogu jiro xoreynta Ogadenya,kulankaas ayaa kusoo beegmay maalintii ugu horeysay bisha barakaysan ee Ramadaan,waxaana kulankaas kasoo qayb galay dhammaan culima-awdiin ka kasoo jeeda Ogadenya ee ku dhaqan magaalada Garissa oo intooda badan ka hadlay kulankaasi.
Xog-yahaya arimaha diinta ee jaaliyada bariga africa faraca Garissa oo kulankaasi soo agaasimay ayaa ku nuuxnuuxsaday inay jaaliyada iyo culimadu sii wadi doonaan muxaadarooyinka iyo barnaamijyada wacyi galinta ah ee kor loogu qaadayo fahanka bulshada ee taagerida iyo garab istaaga halganka xaqa ah ee ay hurmuudka ka tahay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya(JWXO).
Gabagabadii kulanka ayay culimadu soo saareen baaq ka kooban dhowr qodob.
1-In Bulshadu sii laba jibbaarto isgarab taaga halganka Xaqa ah meel kastana ka muujiso taageeradeeda.
2-In bulshadu gacmaha isqabsato kana faaiidaystaan qalalaasaha iyo marxaladahan cusub ee kusoo kordhay itoobiya.
3-In Culimada iyo Aqoonyahanka Soomaaliyeed aysan indhaha ka dadanin kana aamusin waxa ka dhacaya Ogadenya.
4-In laga feejignaado kuwa magaca culimada ugu adeegaya Itoobiya,lana ogaado in aysan matalin magaca culimo-awdiinka.